Isivumelwano semozulu: ukuba abantu kwisibhinqa esihle: uMartin Vrijland
Isivumelwano sesimo sezulu: ukuba abantu ngebhokisi elihle
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	29 Juni 2019	• 19 Comments
Umele uhleke kwi- i-sophistication apho abantu baphangwa phantsi kwegama 'isivumelwano sezulu'. Incoko entsha ye-Orwellian ikhethwe ngokukhethekileyo. Yile ndlela uyenza ngayo: ,,Sizakuzama wonke umntu ukuba athathe inxaxheba. Oko akuthethi ukuba izinto aziyi kutshintsha. Kodwa sineminyaka engama-30 kulezo zitshintsho, isizukulwana. ''
Konke kuguqulwa kwiindaba ze-Orwellian. Imizekelo yale nto yiyo: ukuzithandela okunyanzelekileyo, ukuthunywa koxolo (ukuthumela imikhosi kwimfazwe), ukunakekelwa kwempilo yengqondo (ukuvalelwa entolongweni kunye nokuphathwa kwamachiza) kunye nabanye abaninzi. Kodwa le nkcazo yinkcazo ekhethiweyo ye-Orwellian: "Siya kudukisa wonke umntu". Ngokwenza oko kuthetha ukuba kunjalo ngoku: 'Siya kuhlwaya wonke umntu ongathathi nxaxheba.
Siyabona ukuba kamva kufanayo nqaku ye-AD:
Sekunjalo injongo yeSivumelwano seNkcazo ukukhupha isiqingatha esiningi kwi CO2030 kwi-2 kwiminyaka elishumi elinanye kune-1990. Kule nto, iKhabinethi iza kubonisa uluhlu lwamanyathelo, njengokunyuka kwindleko yegesi kunye nokuhla kwelo lombane. Kuya kuba neenkxaso kunye neemboleko zempompo zokufudumala kunye nokufakelwa kwezindlu.
Kodwa ngokuqinisekileyo ukuba zonke izinto eziza kujonga ziya kufuneka zenziwe ngexesha elizayo. Ngoku ikhabhinethi ngokukhethekileyo ikhetha amagama amnandi. Ngokomzekelo, uMphathiswa uKajsa Ollongren (Ophilayo) uthi wonke umntu ukhululekile ukuzigqibo ngokwabo ukuba bafuna ukwenzani nekhaya labo. ,, Abantu abafuna ukwenza utshintsho oluthile banokufumana iingcebiso malunga neli xesha elifutshane. Kungenzeka ukuba ulungelelanisa ibhoyile yakho ngcono. "
U-Ollongren uyayilumkisa ngokuphambuka okukhulu abaphathi bezindlu kufuneka bathathe - ngokubasekela amakhaya abo okanye ngokukhipha igesi. ,, Ngaba uphahla lwakho alukwi-insulated well? Emva koko unokufumana uncediso kuloo. "" Kodwa ingaba uncediso olunjani kwaye phantsi kweyiphi imimiselo lihlala liyimpawu yombuzo.
Kucacile ukuba kuya kuba nekhefu lehlabathi lokufudumala apho abantu banokuboleka khona kwi-euro ye-25.000 ukwenza ikhaya labo lihlale lizinzileyo. Nabani ongenakufuna ukuboleka imali enjalo okanye ukuhlawula loo mali-mali, baya kuchitha imali eninzi kwiindleko zamandla ngenxa yerhafu yokunyuka kwegesi kwiminyaka embalwa.
Nangona kunjalo kubonakala kunengqondo ukulinda de kube sekupheleni kwe2021 kunye nokulungiswa okukhulu. Emva koko bonke oomasipala kufuneka benze isicwangciso sokunikezelwa kwamandla kwiindawo ezommandla. Unxibelelwano olushushu luya kufakwa kwiidolophu ezinkulu ngokukodwa. Kwizindlu ezixhunyiwe kuyo, ibilisi liyakushiya indlu. "Awudingi nto ngoku," kusho uOllongren.
Ngoko umhlathi wokuqala ubeka ukuba intengo yegesi iya kunyuka kwaye umbane uya kuba ungabizi. Ukuba sisenokwenzeka ukuba oku kuthetha ukuba kufuneka ulungelelanise ukuze uguqule kwizinto zombane zegesi uze usebenzise umbane. Okubangela ukuba uhlawulise imali kwaye ukuba, umzekelo, igesi iphakama i-90% kunye nombane uwela kuphela i-1%, awuzange ukhohlise njengomlungiseleli, kodwa wonke umntu onokulinganisela ulahlekelwa ngaphezulu. Ukuba, ngaphezu koko, ukusebenza kombane kunye, umzekelo, ukufudumeza indlu kuyaphantsi, kuya kufuneka ke uthenge umbane ophezulu kunye nokulinganisela uza kulahlekelwa ngaphezulu.
Umhlathi wesibini uqulethe umyalelo wokuqesha umcebisi oza kuhlola indlu yakho utshintsho olufunekayo. Ungatsho ukuba oku kuya kubiza imali kwaye kuya kuba yimfuneko yokuba unikwe ingxelo enjalo esemthethweni. Irejista yemali!
Kwimimiselo yesithathu, iingubo zokuphuma kwegazi sele isinikwe ngefom yesibonelelo. Nangona kunjalo, sinokuyicinga ukuba loo mali iyakuthi ithwale inxalenye yeendleko zenguqu enokufuneka uyenze (emva kokuba uqeshe umcebisi wamandla ogunyazisiweyo oza kubeka utshintsho olunyanzelekileyo kuwe).
Emva koko, ibhokhwe enkulu yemali yerhafu igcinwe kwingxowa yesizwe yokufudumala apho abantu banokuboleka imali ukufezekisa utshintsho olumiselweyo. Yiyo loo nto iya kuba mboleko kwizinga elithile lomdla, kwaye yile ndlela abantu baphoswa ngayo emqaleni: "Awunakuguqulwa, kodwa ke irhafu yakho iya kwanda kakhulu. Ukuba ufuna ukutshintsha, kufuneka ube neengxelo ezisemthethweni ezilungiselelwe kwaye unako ukufumana inkxaso-mali encinci, kodwa ngaphezu kwakho konke uboleka imali eninzi". Ngamafutshane, abantu baphoqelelwe ukuba bahlawule ngokukodwa kwetyala kwaye kufuneka bahlawule ngakwesobunxele okanye ngakwesokudla. Ngubani Ngesihlwele.
Kwindawo yokuqhuba, yonke into yabiza kakhulu kwaye iguquliwe. Mane ufunde okwesikhashana:
Urhulumente angathanda ukuba amaDutch aguqule kwiimoto zombane. Oku kusenokuba isandla sesibini, apho kukho izicwangciso zenkxaso-mali ezifanelekileyo. Kwizicwangciso zemozulu zasekuqaleni, inkxaso-mali yokuthenga ye-6000 i-euro iya kusebenza kwiimoto zeplagi-intsha, kodwa isibonelelo sikhoxisiwe.
I-subsidy entsha yokuthengwa 'iya kugqitywa', njengoko iSivumelwano seMimoya sichaza ngoku. Ngcaciso emfutshane: abantu abafuna ukuthenga imoto yeplagi kwiminyaka ezayo, abazi kakuhle ukuba oku kwenziwayo. Ukuba imali iya kuba yinto ephantsi kakhulu kune-6000 euro, ibonakala iyinyani.
Nanku, urhulumente uthi abantu baseDatshi ababophekanga ukuba balahle i-petrol okanye i-diesel car. Akunjalo, akuyimfuneko, kodwa ibiza izindleko zabanye abahamba ngemoto. Ngenxa yokuba umsebenzi we-excise kwi-diesel iya kunyuswa inyathelo ngesinyathelo kwiminyaka emithathu ezayo.
I-subsidy entsha yokuthenga ichazwe ngakumbi. Ngamafutshane: "awuyazi into oyifumanayo ukuthenga imoto enjalo, kodwa iyaba yimfuneko". Ewe, unokhetho lokuqhuba i-petroli okanye idizili, kodwa ke uya kuhamba elihle hlawula ngaphezulu. Ngokuqinisekileyo, ukuhlawula ezininzi kunokwenzeka "kwiimanyathelo", apho sonke sinokucinga ukuba ekusebenzeni kuya kuba ngamabhotile angama-7.
Ngamafutshane, uye wadlala kakhulu kunye ne-CO2 yesimo sezulu sonyaka odlulileyo ngesizathu esisodwa esicacileyo: Ukudala i-alibi ukuze ukwazi ukuphanga imali engakumbi kubantu.
Kuyamangalisa ukuba isivakaliso sesivumelwano semozulu sifike ngeveki ukuba iintsuku ezishisayo zikaJuni zithethwa ngexesha elide kulo lonke elaseYurophu. Asiyi kuthetha ngeteknoloji efunekayo ukuchaphazela imozulu. Ininzi yabo ayikho, phantsi kweengcamango zeengcinga zeqhinga.
Ziziphi ubungqina obonakalisa impembelelo enhle yazo zonke ezo zitshintsho zamandla? Ngokomzekelo, ukuveliswa kweebhetri kwiimoto zombane yintlekele enkulu yendalo, kwaye kukho iinkalo ezininzi ezifanelekileyo ezinxulumene nomtshintshi ovela kwi-gas ukuya kumbane. Yaye yintoni impembelelo yokusingqongileyo yemveliso yazo zonke iintlobo zokufakelwa kwezinto zokufakelwa izinto?
Saphinda sibone umzekelo omhle 'Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo', apho ingxaki eyenziwe ngokwayo kwiimidiya kunye nezopolitiko ixutywe; impendulo phakathi kwabantu ixhaswa ngumatshini omnye wepropaganda; ukuze uqhube isisombululo (esibiza kakhulu) kwisifo somntu.
I-CO2 iyimfuneko ebalulekileyo emoyeni esetyenziswa yimithi nezityalo ukwenza oksijini. Kulo nani elincinci kumoya ongenakonakalisa kwaye i-CO2 yinyuka kwixabiso elingaziwayo (ukusuka kwithuba elincinane le milinganiselo eyenzekayo), kunoko ngenxa yoko kwandisa imisebenzi yelanga ngaphezu kwesizathu ukufudumala kwehlabathi. Unokukufumanisa oku ngokwenza uphando oluyimfuneko. Nangona kunjalo, i-intanethi isele igcwele iindawo ezidalwa ngamabomu ezenza ukuba abezindaba bazama ukukuphumelela ngokugqithisileyo kweendaba ezibuxoki kunye nokukholelwa ukuba basathetha inyaniso. Inkcaso elawulwayo ngoku isebenza njengokhuseleko lomnatha. Emva kokuba iintlanzi zixhomekeke kwindawo yokukhusela inqanawa yokhuselo, loo nqanawa iyacwina kwaye abantu abadibeneyo baphakanyiswa kwakhona kwi-media kunye ne-old order yezopolitiko.
Ngoko ke xa unomsindo ngemilayezo enjengaleyo malunga nesivumelwano semozulu, khumbula ukuba akufanele usalindele ukuba utshintsho luvela phezulu. Amagundane ephangi e-Hague naseBrussels akakho ukukunceda. Badlala kuphela ukubonakala kwentando yesininzi, ngokusebenzisa umdlalo wekhohlo kunye nokunene, okhuselekileyo kunye nenkcaso. Ngoko kufuneka wenze utshintsho ngokwakho kwaye uthathe inyathelo. Funda apha indlela.
Uludwe lwekhonkco lovimba: ad.nl
I-PowNed ibeka i-Poelenburgse vloggersrel kwisiganeko kunye nabalingisi, eyongezelelweyo kunye nokuqondisa
tags: eziziimbalasane, Kasje, melwano se mozulu, ukuboleka, mboleko, ngumphathiswa, kazwelonke, Ollongren, imali yokushisa
Jaline Bies wabhala wathi:
29 Juni 2019 kwi-13: 20
Ukuba ndiphulaphule inkohliso, sinokuqala ukuhlawula irhafu size siboleke imali yerhafu ehlawulwayo, iimvumi ze-hmmm ziqiqo.
Iintsilelo ukuba yena kunye nekhabhinethi bafumana i-crazier nganye veki. Ukuba ucinga ukuba uvile yonke into, benze into entsha.
Ukongeza, iimoto zombuso apho zivumelekile ukuba ziqhube umbane zivele zibanezixhobo zombane, zenze indlu yazo ibe yinkcazo-moya kwi-finesse?
29 Juni 2019 kwi-13: 53
Ngokuphucula umthetho we-euthanasia sinokunciphisa kakhulu ukukhutshwa kwe-CO2. Kwaye umbulelo kumthetho we-D666 malunga nokuvunwa kwamalungu, kuzinzileyo, iintaka ezimbini ngelitye elinye.
29 Juni 2019 kwi-14: 00
.. usucele uSarco ukuba abe negalelo kwindawo engcono, kuba indawo engcono iqala nawe 😀
"Xa ungashenxisa ngokuthula kuyo nayiphi na indawo"
29 Juni 2019 kwi-16: 15
I-ajenda ye-disopulation disguised ajenda phantsi kohlobo lwe-'khuselo lwendalo ', kodwa ewe, hamba uze uchaze ukuba kumhlali ohlala emadurodam ..
29 Juni 2019 kwi-18: 05
Nangona uchaza, abantu abaqhelekileyo abayi kukholelwa. Ngulo lukhetho olukhethileyo kubo!
Hayi, namhlanje bahleli elunxwemeni kule mozulu eshushu. Ilanga likhanya, ubhiya aphantsi, ihlobo liqalisiwe. Amadoda, abafazi njll banokuzingela.
Ngubani na ohlalayo .. oh xa nje umlindi ohambileyo othumbileyo eshisa ngomlilo epanini, abantu abaqhelekileyo baqhubeka bejonge kuyo.
Isivumelwano semozulu yinkqubo ye-trade barrier edibeneyo kuba amazwe angamahlwempu ase-EU kufuneka athathe inxaxheba kwaye umbuzo nokuba ingawufumana. Ngoko ke imimiselo ye-ISO. Siphila ixesha elide 'ukhuphiswano' oluphakathi kwamazwe e-EU, i-quod engekho ngenxa yokuba ayikho.
29 Juni 2019 kwi-19: 56
Kwaye kwakhona kwakhona ukuchasana kukaPatrick Moore, umgangatho wesibini, kuqala ubeka i-LGBTQ ILogo Logo Greenpeace kunye nabanye abambalwa ababizwa ngokuba ngabanyatheli bezityalo, kwaye emva koko angakwazi ukuqhuba inkcaso ephikisanayo neGreenpeace, indlela enengqondo ngayo le nto eyenziwe.
UPatrick Moore uhamba ngobuchule kwinkqubo yokuchasana
Kwaye nantsi iJamani elaliqamba amanga kuwo wonke umntu,
Yilenda elide elide eliya kuvela kulo.
29 Juni 2019 kwi-22: 19
Ewe, "isiJamani". Nguwo ubuzwe babo obufihlakeleyo.
29 Juni 2019 kwi-23: 08
Ikhonkco yombombo ibhekiselele ngqo kwi-kabbalah, i-freemasonry / iminyaka entsha njl. Ngoko imfundiso yaseBabiloni engummangaliso eyayiqhubhisa wonke umntu emhlabeni jikelele.
Kabbalah kunye nokuCamngca kwiZizwe
29 Juni 2019 kwi-23: 15
Ubumba bokuqala obhaliweyo bubhalwe kwimbali yaseBhayibhileni kaNowa, owasinda kumkhukula owawubhubhisa inani labantu ngenxa yeziphambeko zalo. Ubumnandi - "umlambo wami emafini" - ukhonza njengomnqophiso phakathi kukaGd kunye "nayo yonke imiphefumlo ephilileyo," ekhumbuza iGd yesithembiso sakhe emva kokuba umkhukula ungabhubhisi ihlabathi kwakhona, nangona kunjalo. Kutheni umnyama? Yintoni ekhethekileyo ngomnkantsha owenza uphawu loxolo?
isenzo esichasene nomthetho, umgaqo, okanye ikhowudi yokuziphatha; ityala.
Ndiya kugcina iliso ngenxa yezono ezingaphezulu (Isimboli seziliso)
I-ajenda ye-LGBTQ ngoko ke inxalenye yenzalo "yokuhlengwa ngesono"
30 Juni 2019 kwi-14: 44
Nanku i-documentary engcono kakhulu malunga nehlabathi labasemagunyeni abaqhelekileyo kunye nendlela edibene ngayo nobukhosi.
30 Juni 2019 kwi-16: 33
Wachaza umva wecala.
30 Juni 2019 kwi-16: 43
7 Julayi 2019 kwi-11: 23
Ixesha leMdatshi elimnyama lifumana phi imivuzo epheleleyo yobukhoboka obwenziwe ngabafana be-script? Enyanisweni ngeendleko zabafana beeskripthi kwaye kungekhona abantu abaqhelekileyo. Uphi ummeli ovela kwelinye ilizwe eliya kumelana neebhola ukulwa naloo mbulelo ngenxa yokuphulwa kwamalungelo oluntu, akukho myalelo okanye abafana be-script baqinisekisa ukuba ijaji labafana be-script liqikelela ukuba. Ngelishwa ngelinye ilanga ummeli welizwe lokungena kwelinye ilizwe angasuki, uloyiko lokuba uphumele ngaphandle komyalelo wabameli. Kwaye imeko ibaluleke kakhulu kuye kunokuba enze into efanelekileyo.
"Intsingiselo" kukuba inzala yabafana abavela kwiskripthi ibonakala njengengqungquthela yamaDatshi amnyama. Ewe Badlala i-smart Baqala ukubagqilaza kwaye bazuze kakuhle kwaye ngoku njengokuba kuthiwa 'abakhuseli'. Usoloko ubona eli qhinga liboniswe kuyo yonke imigaqo eMadurodam. Kwaye abantu abaqhelekileyo bathatha loo midlalo emnandi.
30 Juni 2019 kwi-17: 28
Inqaku elincomekayo kakhulu, kunye nemilinganiselo ye-CO2 yokukhutshwa akunciphisi nakwezinye kodwa idluliselwe kwamanye amazwe afana neChina. Akukho mntu uthetha nge-CO2 eyongezelelweyo yokukhutshwa kwemoto yamagesi, akukho mntu uthetha ngomthi owawa ngenxa yezityalo ze-biomass. Ngokuqinisekileyo bavelisa i-CO2, kodwa loo nto ayifakiwe.
Kwaye ke asisathethi malunga nokusebenza komjikelezo wonke.
Kungekudala ndaxakeke ngokufakelwa kombane wendlu okumele kulungiselelwe ukutshintsha kwamandla. Awufuni ukwazi ukuba imali enjani iphakanyisiwe ukuba ufuna 3x 40Ampere endaweni ye25A,
Nabani na obala zonke izinto kwaye uyaziqwalasela zonke izinto uya kufumanisa ukuba ukukhutshwa kwe-CO2 kwanda kunokuba kunciphise, ngoko ke isivumelwano semozulu asikholwanga.
Inzuzo kuphela yemilinganiselo yiphumo loqoqosho, elingenasetyenziswa kubahlali abaqhelekileyo.
1 Julayi 2019 kwi-00: 33
Kwaye ukuba ucinge ukuba eJamani neFransi uza kufumana inkxaso-mali ukuba utshintshe kwi-gas. Ngaba baya kuba neerhasi ezahlukileyo apho? Ekunene ...
Kwaye ... ngaphandle kwegesi e-Netherlands, ngaba baya kuyeka ukuganda kwi-Groningen okanye abayi kukhulula ngokwaneleyo?
Isiphetho: abantu abambalwa baba zizityebi kwaye isihlwele siya kuhlawula ...
5 Julayi 2019 kwi-14: 58
Coco Flannel wabhala wathi:
24 Julayi 2019 kwi-18: 19
Ukugcwalisa iingxowa kwinqanaba leDatshi ayisiyonjongo yokugqibela. Eso sisilingo esinikezelwayo ukuze oosomashishini bakwazi ukuphendula kwaye ke oko komeleze inkolo yemozulu kwaye bayisasaze ngakumbi ebantwini kwaye ngakumbi kwisizukulwana esitsha. Abezobupolitika baseDatshi nabo bancinci kakhulu, icandelo eliphantsi lecawe yemozulu yehlabathi, enamakholwa amaninzi anyanisekileyo.
Injongo ekumgangatho uphakamileyo (ngaphezulu kwelizwe elimdaka laseNetherlands) kukuguqula imibutho yoluntu kwihlabathi liphela ngokukhawuleza, ukuyiguqula ibe kuluntu olulawulwa yiteknoloji, equka oopopu abacuthisiweyo ('siyakuchoboza' ubuchwephesha kunye nobukrelekrele buyahambelana nge-aesthetics yetekhnoloji eyonyuliweyo ekufuneka ihenda). Oku kuthandela imali enkulu yokwenene, amandla okwenyani.
25 Julayi 2019 kwi-10: 55
Enkosi kakhulu ngencomo yencwadi.
Kwimeko yemibutho emdaka, nantsi enye intwana ye-siwilliamism eLondon
Ngaba ivela phi yonke le mibutho ngequbuliso?
24 Julayi 2019 kwi-18: 40
Ndicebisa incwadi kaNikos Salingaros ethi Anti-architecture (kukho nenguqulelo yasimahla kwenye indawo kwi-intanethi), le yindawo yokudlala yamandla ngamandla. Icawe yemozulu ikwicala le-eco optimism / isimilo, ubukrelekrele, ubugcisa obuveliswa buchwephesha yenye inkalo enkulu yokudlala yamandla, engaphelelanga kulwakhiwo, kodwa uyilo lusisiseko kwaye lubiquitous (jonga icawe yesimanje, ye-neo-modernism / i-post-modernism kunye ne-deconstructivism) ngaloo ndlela yindlela yeempawu zamandla kunye neendlela zokuphembelela nokulawula ingqondo yomntu ...
Icawe yemo yezulu ibhengeza isimilo kunye nokusinda, i-aesthetics yindlela yokutyibilika, indlela enamandla kakhulu, kwaye ke kufuneka isetyenziswe ngokuqatha kuzo zonke iindawo ezinokubakho.
« I-Deepfakes yintoni na kwaye yinto ede kangakanani?
Ulwaphulo-mthetho li-alibi elifanelekileyo lokupheliswa kwemali kunye nokulawula ngokupheleleyo abantu »
Iindwendwe ezipheleleyo: 15.974.144
Intsholongwane ye-corona ('i-Wuhan virus') ine-patent yesiNgesi: inombolo ye-EP3172319B1
Ulutsha lwanamhlanje lufuna ukuzalisa iinkampu zokufunda kwakhona (i-gulags) ngabahambi bemozulu
I-coronavirus evela eTshayina ibonelela nge-alibi efanelekileyo kwisibophelelo sokugonya kwihlabathi
UMartin Vrijland op Intsholongwane ye-corona ('i-Wuhan virus') ine-patent yesiNgesi: inombolo ye-EP3172319B1
SalmonInClick op Intsholongwane ye-corona ('i-Wuhan virus') ine-patent yesiNgesi: inombolo ye-EP3172319B1
SandinG op Intsholongwane ye-corona ('i-Wuhan virus') ine-patent yesiNgesi: inombolo ye-EP3172319B1